संसारका खानीमा अब कति बाँकी होला सुन ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > विशेष > संसारका खानीमा अब कति बाँकी होला सुन ?
बीबीसी । हुन त यो भाउ सुन व्यापारीहरूका कारण पुगेको थियो तर प्रश्न के उठेको छ भनेः संसारका खानीमा कति सुन बाँकी छ र यो कहिले सकिन्छ?
सुनको माग एउटा लगानीको रूपमा, हैसियतको प्रतीकको रूपमा तथा कैयौँ विद्युतीय उपकरणका मुख्य पार्टपुर्जाको रूपमा बढिरहेको छ।
उच्चतम बिन्दुमा पुगेपनि त्यसको केही वर्षसम्म सुनको वार्षिक उत्पादनमा नाटकीय गिरावट नआउने विज्ञहरू ठान्छन्। “सुनखानीका उत्पादन स्थिर तहमा पुगेको छ। अब सम्भवतः घट्दै जानेछ। तर नाटकीय गिरावट हुनेछैन,“ मेटल्सडेली डटकमका रस नर्म्यान भन्छन्।
खानी कम्पनीहरूले जमिनमा कति सुन बाँकी छ भनेर दुई किसिमबाट अनुमान गर्छन्। सुन उत्खनन कार्य झन् झन् कठिन र महँगो हुँदै गइरहेको छ । सुन उत्खनन कार्य अझ कठिन र महँगो हुँदै गइरहेको छ ।
रिजर्भ्स -अहिलेको सुनको भाउ अनुसार फाइदाजनक रूपमा निकाल्न सकिने सुनको परिमाण।
चन्द्रमामा पनि सुन रहेको छ। तर त्यसलाई त्यहाँ उत्खनन गरेर पृथ्वीसम्म ल्याइपु¥याउँदा लाग्ने उच्च लागतका कारण त्यो आर्थिक रूपमा व्यवहारसङ्गत छैन।
साथै एन्टार्टीका महादेशमा पनि केही सुनखानी रहेको बताइन्छ। त्यहाँबाट पनि उत्खनन गर्न अत्यन्त महँगो पर्छ। समुद्रको पीँधमा समेत सुन छरिएर रहेको हुन्छ। त्यो निकाल्नुपनि अति महँगो पर्छ।
सुनको एउटा राम्रो कुरा के हो भने खनिज तेलजस्ता अन्य स्रोतजस्तो यसको उपभोग गर्ने वित्तिकै नष्ट हुँदैन। यसको पुनरुपयोग गर्न मिल्छ।
त्यसैले विश्वमा सुन कहिल्यैपनि सकिनेछैन। खानी रित्तिएपनि सुन रहिरहनेछ। विद्युतीय सामग्रीमा सुनको प्रयोग गरिन्छ। मोबाइल फोनमा पनि औसतमा केही पाउन्ड बराबरका सुन हुन्छन्।
फ्याँकिएका मोबाइल फोनहरूबाट सुन झिकेर पुनः प्रयोग गर्ने प्रयास सुरु भइसकेको छ। (समाचार, तस्विर: बीबीसी)
२०७७ असोज ९ गते १४:०१ मा प्रकाशित
अब बिहान ६ देखि नौ बजेसम्म मात्र पसलहरु खोल्न गर्न पाइने, प्रशासनले निकाल्यो यस्तो सूचना
कोरोना नियन्त्रणमा अग्रमोर्चामा खटिएका नौजना सुरक्षाकर्मीमा संक्रमण
चीनको चेतावनी–उत्तर कोरियामा कुनैपनि बेला युद्धको हुनसक्ने